Jamaame | QuickiWiki
Jamaame waa degmo ku taala Gobolka Jubbada Hoose, waxay Kismaayo u jirtaa qiyaas dhan 60 km. Jamaame magacii hore waxaa ladhihi jiray (maargariite)
Jamaame waxaa dega qabiilka Biimaal,Surre,iyo in yar oo beesha jareer iyo digil iyo marifle ah waxaa soo raaca dadyow asalkooda ka soo jeeda waddanka Yemen, gaar ahaan Xadarmoot. Magaalada waa magaalo aad u hurumarsan. Waxaa ku yaalay isbitaal weyn iyo dugsi oo raacsanaa qolo maraykan ah. Sidoo kale waxaa ku yaalay dugsi raacsanaa masaarida. Jamaame waxay leedahay laba suuq oo laka yiraahdo suuq mugdi oo ku yaala xaga dambe ee magaalada iyo suuq iftiin ama suuq weyn ee ku yaala magaalada xaga hore ee laga soo galo.( suuqi iftin waxaa degana jiray carabta yamani u badan) Sidoo kale magaalada waxay leedahay seddax xaafadood oo lakala yiraahdo Howlwadaag, Kacaanka iyo Nasiibwanaag (Nasiibtumaal). Magaalada waxaa mara webi yar oo la yiraahdo Webi-Urow lagana soo jeexay webiga weyn ee Jubba. Heloyinka xoolaha biyaha ay ka cabaan waa kuwan
2. Webi uroow oo uu dhaw bostadda Iskuulladda waxaay dhan yihiin afar iskuul oo kala ah .
2. Qasabka iskuul
3. D.H Dhexe webi uroow
4. Iyo dugsi sare jiirow bakaal waxaa ku yaala xaafada howl-wadaag inta kale waxee ku yaalan xaafada kacaanka .
Masjidka ugu weyn waxaa kuyaala xaafada howl-wadaag iyo masjidka kale Cabdi Jabane labadaba waxee ku yaalan xaafada howl-wadaag .
Saddaxda kale waxee ku yaalan xaafada kacaanka . isbitaalka waa labo isbitaal waxaana kala dhisey dowladda americanka iyo dowladda qaranka soomaaliyeed waxee ku dhistay iskaa wax u qabso waxaa u dhisay ( Siyad bare ) .
1. Waa foor foor ( waana asharaf)
2. Reer barxaar xuul
4. Malaykow sid nuur
5. Xaji axmed muude ( minashiibiyo ayuu ahaan jiray ) Jahooyinka magaalada ka baxaa afarta koono tuulooyinka ka xiga dhanka koonfur , waqooye, bari iyo galbeed .
1. buulo barwaaqo
3. Dhaay garas 4. Bandan jadiid 5. Buundada Araare 6. Eke banoota ( waa garaash weyn wuxuuna u dhaxeya labadan buundada Araare iyo Buulo'ej )
Waqooye 1. Hongore
2. Biliqa laan shuule 3. Waado walay waylo uroon. 4. Qolay awoowe Bari
1. Gondiyerka ( waxaa ku yeelo dhagax shibirka oo dhul baraha maro ) 2. Raaxoole
3. Qalaad geri 4. Deemo
5. Nafta quul 6. Galadley
9. Todobo yaaq Koonfur
1: Buulo Maamow
2. Beled aamin
Beerahan waxee ku yaalan koonfur waxaan lahaan jiray galaadan talyaniga soo socdo :-
1:Ray neero 2: Fagaano iyo Fay fagaano 3. boorini 4. Saardo
5. Jedo Neero
6. Koban ( toorniste waaye beeraley ma ahaa )
7.Ake ( isagana waa toorniste ma ahaa beeraley ogow !!! )
ceelasha waxeen isku yaalan dhanka badda magacyadoodda waa sidan 1. Ceel Saahiye
2. Ceel Dheer
3. Ceel Cali
4. Ceel Abokar 5. Ceel Ahmed 6. Ceel Hele
7. Ceel Bashiir
8. Ceel Gaas gaduud
9. Ceel Easale
10. Ceel Salsado
11. Ceel Ganan Wax soo saarka magaalada
magaalada jamaame waa magaalo dhacda koonfur Soomaaliya Jamaame wuxuu Alle ku muteystat Qeyraad sida Mooska, Cambaha iyo Khudrada Jamaame waxaa hoos imaado Tuulooyin aad u badan sida Bangeeeni, Turdho, NAftaa Quur, ETC
waxeey ku aala futada hooyadiin